कथित बलात्कारी माकर्स
कतिपय लेखकले यस्तो विषयमा लेखिएका पुस्तक स्टालिनहरूले दमपच बनाउन लगाएजस्ता प्रसंग पनि उठाएका छन् । कम्युनिस्टहरू गल्ती छोप्नुलाई पराक्रम ठान्ने हुनाले पनि यो विषय छोपियो भनेका छन् । स्टालिनकृत सोभियत संघ र उनलाई पछ्याउने कम्युनिस्टहरूले त छोपे रे मानौं, तर दुनियाँभरिका कम्युनिस्टविरोधीलाई यो विषय उछाल्न कसले रोक्थ्यो ? रोजा लक्जेम्बर्ग, लेनिन, लुना चास्की, आन्तिनियो ग्राम्स्की, ब्रतोल्त ब्रेख्तहरूजस्ता असाधारण चिन्तकहरूलाई कसले रोक्न सक्थ्यो ? वास्तवमा त्यो घटनाको चर्चाले सर्वहारा वर्गको आन्दोलनको विशाल चुनौतीलाई तलमाथि गर्न कुनै भूमिका खेल्दैनथ्यो, त्यसैले कम्युनिस्टहरूले त्यस सन्दर्भलाई अनावश्यक उराल्न आवश्यक ठानेनन् । त्यस सन्दर्भसँग जोडिएका डेमुथसहित सबै अकल्पनीय दुःख र दमन झेल्दै जीवनपर्यन्त सिद्धान्त र आन्दोलनको निर्माणमा लागेको तर त्यस विषयमा नबोलेको स्थितिमा बिसेक भएको घाउ कोट्याउँदै हिँड्नु आन्दोलनका निम्ति बेअर्थको विषय थियो, त्यसैले कम्युनिस्टहरूले प्राथमिकता दिएनन् । व्यक्तिगत जीवनका विषयलाई व्यक्तिगत रुचिको अधीनस्थ बनाउन थालेका पुँजीवादीहरूले पनि यस विषयलाई उराल्न रुचि देखाएनन् । पुँजीवादीहरूको जीवनमा त झन् त्यस्ता विषयका विनाशकारी प्रवृत्तिगत भ्वाङ छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो नै । डेमुथ–मार्क्स सम्बन्धको पहेलीबारे व्यापक विषय नबन्नुलाई यसरी बुझ्नु पो सही हुन्छ ।
मार्क्स र डेमुथबीचको सम्बन्धको प्रकृति बलात्कार थियो कि अन्य प्रकृतिको भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न तीनवटा विषयमा प्रस्टता आवश्यक छ । एक, यौन सम्बन्धका विविध आयाम । दुई, माक्र्सको जीवनको आधारभूत वैचारिकी । र तीन, घटनाकृत समय र सरोकारवालाहरूको व्यवहार । बलात्कारलाई हरेक युगमा नाजायज मानिएको छ तथापि युग र समाजैपिच्छे बलात्कारबारेको बुझाइ अलग छ । त्यसै गरी यौन सम्बन्धको नैतिकता पनि फरक युग र समाजमा बिलकुल विपरीत लाग्नेसम्मका रहँदै आएका छन् । त्यसैले १७० वर्षअगाडि युरोपमा केलाई बलात्कार मान्थे आम महिला पुरुषले र कस्तो सम्बन्धलाई वैधानिक अनि अवैध भन्थे भन्ने विषयलाई ख्याल गर्नु जरुरी छ । अर्को कुरा, यौनेच्छा प्राकृतिक हो तर यौनबारेका नियम सांस्कृतिक हुन् भन्ने वैचारिकीलाई पनि बुझ्नैपर्छ । आजको समयलाई मात्र हे¥यो भने पनि यौन सम्बन्धका विविध आयाम छन्— वेश्यावृत्ति, विवाह, लिभिङ टुगेदर, ओपन रिलेसन, हाफ प्रेमी आदि । त्यति मात्र होइन, छोराको उपचारका लागि आमाले छोरासँग यौन सम्बन्ध बनाएका, मन परेको वा आदर गरेको पुरुष वा महिलाको केवल इच्छापूर्तिका निम्ति यौन सम्बन्ध स्वीकार गर्ने गरिएका यथार्थहरूसमेत तथ्यगत रूपमा उपस्थित छन् । सिग्मन्ड फ्रायडलाई पढ्दा त हरेक व्यक्ति भौतिक वा मानसिक रूपमा ‘व्यभिचारी’ छ । तर त्यस्ता सम्बन्ध र विषय बलात्कार होइनन् बरु मानव समाजले यौनजीवनलाई व्यवस्थित र सही परिभाषित गर्न नसकेका समस्या हुन् । बलात्कारबाट प्रजनन पनि हुन सक्छ जसरी जबरजस्ती खाना कोच्याए पनि पेट भरिन सक्छ तर मानवीय यौन सम्बन्ध र भोजन ग्रहणको सन्तुष्ट प्रक्रिया त्यो हुन सक्दैन । त्यसैले यौन सम्बन्ध विविध प्रकारको हुन पुग्नु र बलात्कार एउटै होइन । बलात्कारलाई जघन्य अपराधभित्र आज समावेश गरिनुको कारण पनि यही त हो । डेमुथ जिन्दगीभर माक्र्सकै वैचारिकी र संगठनलाई अघि बढाउन समर्पित रहिन् । के कुनै बलात्कृत महिलाले बलात्कारीलाई मर्ने बेला स्याहार गर्न र त्यसपछि पनि बलात्कारीको विचार अघि बढाउन समर्पित हुन सम्भव छ ? माक्र्सको हैसियतका कारण डेमुथसँगको सम्बन्ध बलात्कार थियो भन्ने हो भने माक्र्सको अवस्था कोट–जुत्ता बन्धकी राखेर छाक टार्नुपर्ने खालको थियो, माक्र्सको व्यक्तित्वबाट वशीभूत भएर यौन सम्बन्ध स्वीकार हुन पुगेको भए पनि त्यो बलात्कार भएन । पुरुष आठ हजार वर्षदेखि हैकममै छ, तब के सबै यौन सम्बन्ध बलात्कार मान्नु ? प्रचलित मान्यताविपरीतका यौन सम्बन्धका लागि कहिले रूप, कहिले अन्य प्रभाव त कहिले प्राकृतिक उत्तेजना कारक हुन्छन्, तर ती बलात्कार नै हुन्छन् भन्ने त होइन । लेखक पारिजात खास मान्छेसँगको यौन सम्बन्धबाट डर महसुस गर्छिन् तर बलात्कार ठान्दिनन् । मोनिका लेवेन्स्कीसमेत आफूसँगको क्लिन्टनको सम्बन्धलाई बलात्कार मान्दिनन् । त्यसैले तत्कालीन समयको वैधबाहेकका यौन सम्बन्ध सबै बलात्कार बुझ्ने कुरा कदापि सही होइन ।
कुनै पनि सामाजिक घटनाको समाधान त्यही समयका सरोकारवालाहरूले समयसापेक्षतामा कसरी खोजे भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । माक्र्स र डेमुथबाट जन्मिएको बच्चालाई त्यति बेला त्यसरी व्यवस्थापन गर्नु नै सर्वोत्तम कदम उनीहरूले ठानेको देखिन्छ । जब राजनीतिक संगठनात्मक अभियान सुरु हुन्छ, यस्ता अकल्पनीय समस्याहरू आउँछन् । त्यति बेला दुस्मन वर्गलाई फाइदा उठाउन नदिने गरी व्यक्तिगत कमजोरीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नै हुन्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि आज त भीषण हमला छ भने, पुँजीवाद नै गलत भन्ने यात्राको सुरुआतमा दुस्मन वर्गबाट कति हमला थियो, अनुमान सम्भव छ । त्यस्तो बेला मानवजातिको मुक्तिको अभियानलाई अघि बढाउन डेमुथदेखि एंगेल्ससम्मले सांस्कृतिक बलिदान गरेका हुन सक्छन् । माक्र्स र डेमुथले गल्ती नदोहो¥याउने आत्मालोचनामाथि जेनीले माफी दिएकी हुन सक्छिन् । माक्र्सलाई यौन–अराजक वा महिलापीडक कसैले भनेनन् तर एक गल्ती पनि गल्ती नै हो । माक्र्सको भीमकाय सकारात्मक व्यक्तित्वमा यो सन्दर्भ एउटा दागजसरी उपस्थित छ भनेर मान्न सकिन्छ । त्यसैले माक्र्स होऊन् या बुद्ध, सबैलाई कमजोरीसहित बुझ्नु नै सही हुन्छ । तर कार्ल माक्र्सलाई बलात्कारी ठहर गर्ने हो भने जेनी र एंगेल्सलाई समेत बलात्कारी–संरक्षक करार गर्नुपर्ने हुन्छ अनि पाल लाफार्गदेखि लेनिन, रोजा लक्जेम्बर्गदेखि एवलिन रिडसम्मलाई मार्क्स–डेमुथ सम्बन्धभित्रको मार्क्सको जघन्य अपराधलाई छोपछाप पार्ने खलपात्रहरू मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बाँकी के रहन्छ ? माक्र्सवाद भनेको ढोंगी, नैतिक मूल्य स्खलित भएका अपराधीहरूको पोथा हो भन्ने निष्कर्ष । त्यस्तो निष्कर्षमा त माक्र्सवादका चरम विरोधी पनि पुग्न चाहन्नन् ।
नेकपा नेता बम द्वारा कैदीबन्दी भेटघाट
दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद: रणविर